मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, के विषयमा हुँदैछ छलफल? - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, के विषयमा हुँदैछ छलफल?
काठमाडौंः आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सोमबार साँझ बस्ने जानकारी आएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । यसैबीच, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वको कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) को बैठक जारी छ । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा भइरहेका प्रगतिका बारेमा मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
त्यस्तै सीसीएमसीको सोमबारको बैठकले समग्र परिस्थिलाई विश्लेषण गरेर हवाई सेवा र सीमा नाकाका बारेमा केही निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले असार २१ गतेसम्म सीमा नाका र हवाइसेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातबारे पनि बैठकमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने बुझिएको छ । सरकारले चैत ११ गतेबाट लागू गरेको लकडाउनमा गत असार १ गतेदेखि केही खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधन जोरबिजोरका आधारमा चलाउन दिएको छ ।